လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် တဟုန်ထိုးလူကြည့်များနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်ထောက်ပြ လိုက်တဲ့ ဦးကောင်းကျော် ~ Myanmar Online News
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် တဟုန်ထိုးလူကြည့်များနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်ထောက်ပြ လိုက်တဲ့ ဦးကောင်းကျော်
ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးကောင်းကျော်က လူမှုကွန်ရက်မှာ တဟုန်ထိုး လူကြည့်များ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရေ ဘာတွေလဲ ဆိုတဲ့ သီချင်း( MTV ) ထိရောက်စွာ ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ စကားပြောရင် အရမ်းထိမိတဲ့ ဦးကောင်းကျော်ကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အချစ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ အဆိုပါသီချင်း(MTV )ကို ပညာသားပါပါ နဲ့ ထိထိမိမိ ဝေဖန်လိုက်တာပါနော်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်း သရုပ်ဆောင် မှုတွေပါဝင်နေတဲ့ သီချင်း(MTV ) အပေါ် ဦးကောင်းကျော်ရဲ့ဝေဖန်လိုက်မှုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကောင်းကျော်ကတော့ “ကို ရေ ဘာတွေလဲ ? facebook ပေါ်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဤကဲ့သို့ အမြင်မတင့်သည့် ပုံများကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ဘာတွေ ဖြစ်ကြတာ ပါလိမ့်ပေါ့ နော် ? ထင်လိုက်တာက လက်စွမ်းထက်လှတဲ့မြန်မာချောင်းရိုက် ကင်မရာမင်းများရဲ့လက်စွမ်းပြကွက်တွေထဲ ထိုသူတော့မိသွားပြီ မှတ်လိုက်တာ ပေါ့ ?
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က cbကနေ သီချင်းဖိုင်လေး ပို့ပေးလို့ ဘာပါလိမ့် ဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့် လိုက်တော့မှ အော်ဒီလိုကိုး ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်လေ?? သီချင်းဖိုင်လေးကို စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဦးဆုံး အထင်ကြီး လေးစားသွာတာက အဆိုတော် မမ ???
‌တေးရေး တေးဆို အဆိုတော် ဒါရိုက်တာ ဆိုတော့ လေးစားပြီလေ??ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ဆိုတာ ရှားပါးသွားပြီ ဒီတော့ သေချာကြည့်ရှု့ခံစား မိသည်ပေါ့ ???
တေးစာသား * (မှတ်သားထိုက်သည် ဂန္တဝင်မြောက်စာသားများ ။)တေးဆိုသူ(မထူးခြားသော အသံပါရမီရှင်မျိုး) သရုပ် ဆောင်(ဟိုးရှေ့က စီနီယာ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မမများ လုံးဝမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လွန်စွာအသက်ပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများ)
ဒါရိုက်တာ ( အခုခေတ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ MTV လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေ မြောင်းထဲရောက်သွားလောက် ထူးခြားစွမ်းအားကြီးသည့် နောက်ဆုံးပေါ် အထူးပြုလုပ်ချက် ပါဝင်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေနဲ့) ဆိုမှတော့ဒီသီချင်း MTV က အကုန်လုံးပေါက်ပြီပေါ့ ဗျာ ဒါကြောင့်လဲ လျှပ်တစ်ပျက်အတွင်းမှာ ဒီလောက်ကျော်ကြားသွားတာနေမှာပေါ့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသီချင်းဖြစ်မြောက်အောင် ပူပေါင်း ပါဝင်ပေးကြသည့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ တေးရေး တေးဆိုများအားလုံးကို လေးစားအားကျမိတယ်?? မောင်နဲ့နှမ သားနဲ့အမိမိသားစုတွေ မျက်စိမဖွင့်ရဲလောက်အောင် ကောင်းလွန်းတဲ့ နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ် များအတွက်
ဂန္တဝင်မြောက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ပါသည်ဗျာ ? (သီချင်းဖိုင်ကတော့ ကြော်ငြာပေးသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ မတင်ပေးတော့ပါ) ကိုင်း ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဗျာ ??? ” ဆိုပြီး လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရေ ဘာတွေလဲ သီချင်းကို ဝေဖန်ထားတာပါ။
ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း အချစ် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဦးကောင်းကျော်ရဲ့အမြင်ကို ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာ ပြောသွားခဲ့ပါဉီးနော်။
#U_Kaung_Kyaw #Myanmar_Online_News #ကိုရေဘာတွေလဲ #MTV